February 2, 2020 - Myitter
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် သံသယရှိသူနေပြည်တော်တွင်တွေ့ရှိ
ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈ သံသယရှိသူနပွေညျတျောတှငျတှရှေိ့ ကနျြးမာရေးနှငျ့အားကစားဝနျကွီးဌာနကယနညေ့ ပိုငျး သတငျးထုတျပွနျခကျြအရ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံကှမျကြိုးမွို့က မွနျမာနိုငျငံကို ဇနျနဝါရီလ၃၁ ရကျနကေ့ ရောကျရှိလာခဲ့တဲ့ မွနျမာနိုငျငံတှငျ အလုပျလုပျနသေူအသကျ (၂၉) နှဈအရှယျ တရုတျနိုငျငံသား အမြိုးသားတဈဦး ကိုယျအပူခြိနျမွငျ့မားလို့ နပွေညျတျောရှိ ပုဂ်ဂလိက ဆေးခနျးတှငျ သှားရောကျပွသခဲ့ပွီး အဆိုပါ ဆေးခနျးက နပွေညျတျော […]
ဖုန်းလာရင် ” ဟယ်လို ” ဆိုပြီသာ ထူးကြတာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ မသိသေးရင် ဖတ်ကြည့်ပါ…
ဖုန်းလာရင် ” ဟယ်လို ” ဆိုပြီး ထူးကြတာဘာကြောင့်လဲ…? ဖုန်းဝင်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းလာတာဘဲဖြစ်ဖြစ် ” ဟယ်လို” ဆိုပြီး စတင်ပြောဆိုလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဟယ်လိုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို သိကြပါလား? ” ဟယ်လို ” ဆိုတာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနာမည်ပါ။ အဲဒီအမျိုးသမီးနာမည် သင်သိပါသလား? သူမကတော့ […]
” မယုံမရှိနဲ့ မေတ္တာပို့ပြီးသာ သစ္စာဆိုလိုက်ပါ ”
သစ္စာဆိုပြီးတော့ မေတ္တာပွားတဲ့နည်း အဲဒီဂါထာ (၃)ပုဒ်က ရတနသုတ်မှာ ပါပြီးသား။ သစ္စာဆိုတာ ဖြစ်တယ်။ လောကမှာ …သစ္စာဟာ အစွမ်းတန်ခိုး အင်မတန်မှ ထက်တယ်။ လူတွေက သစ္စာဆိုမှု အင်မတန်မှ နည်းကြတယ်။ တကယ် ကိုယ့်ဟာကိုယ် သစ္စာဆိုပြီးတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရာတစ်ခုကို တောင်းလို့ ရှိရင် သစ္စာရဲ့စွမ်းအားဟာ […]
” မနေ့က ဈေးသည် ဒီနေ့ သန်းကြွယ် ”
မနေ့က ဈေးသည် ဒီနေ့ #သန်းကြွယ် ကံထမ်း လာတာ ဘယ်သူမှ မမြင်နိုင်ပါ ဘူး….. ထိုင်းထီ(၅၈၉၂၂၇)နံပတ်ဖြင့် ပထမဆု ဘတ် ၆သန်း ဆွတ်ခူးသွားသူပါ။ Please ထိုင်းမှာပါ…. credit unicode version မနကေ့ ဈေးသညျ ဒီနေ့ #သနျးကွှယျ ကံထမျး လာတာ […]
” ၀ူဟန်ရောဂါ သက်သာလာတဲ့ဝေဒနာရှင်တဦးက လက်မ ထောင်ပြ နေတာပါ ”
၀ူဟန်ကို စိန်ခေါ်ပြီ January 2,2020 ၀ူဟန် ဗိုင်းရပ်စ် ကူးဆက်ခံတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသူ ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာတာကို လာရောက် အားပေးစကားပြောနေတဲ့ ထိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ပါ။ ၀ူဟန်ရောဂါကို ထိုင်းက ပထဆုံး အကြိမ် စိန်ခေါ်ပြသလိုက်တဲ့ ရောဂါ သက်သာလာတဲ့ဝေဒနာရှင်တဦးက လက်မ ထောင်ပြ နေတာပါ ။ […]
ဝူဟန်ကပြန်ရောက်လာတဲ့ မြန်မာကျောင်းသူတစ်ဦးရဲ့ ရင်ဘက်နဲ့ ရေးတဲ့စာ….
ရင်ဘက်နဲ့ရေးတဲ့စာ အခြေနေတွေကတော့ အားလုံးသိပြီးကြမှာပါ။ အစကနေ မပြောတော့ပါဘူး။ အခု ခံစားချက်ကိုပြောရရင် ဟိုကိုပြန်မသွားချင်တော့ဘူး။ တက္ကသိုလ်တွေတက်တုန်းက ကျောင်းပိတ်လို့ အိမ်ပြန်ရင် ကျောင်းမပြန်သွားချင်တာမျိုးပေါ့။ ဝူဟန်လေဆိပ်မှာ ဝူဟန်လေဆိပ်မှာ စစ်ဖို့စောင့်နေတာ အစက ဖြစ်ခါစက ချောက်ချားခဲ့တယ်။ တုန်လှုပ်ခဲ့တယ်။ သေမှာကြောက်လို့မဟုတ်ဘူး။ အဲ သေမှာကြောက်လို့ဆိုဦးတော့……. မီဒီယာထက်က စကားလုံးတွေ၊ပို့စ်တွေ(မမှန်ပေမယ့်)က အဖော်မဲ့စေခဲ့တယ်။ […]
” အရပ်ပုတဲ့သူတွေအတွက် ဆွဲဆန့်လို့ ရနေပြီနော် ”
အရပ်ပုတဲ့သူတွေအတွက် ဆွဲဆန့်လို့ရနေပြီနော် ထိုင်းနိုင်ငံက အရပ်ရှည်အောင်ခြေထောက်ဆွဲဆန့်တာတဲ့5’7″ to 5’10″ထိ ရှည်လာပါတယ်တဲ့ အရပ်ပုတဲ့သူတွေအတွက် ဆွဲဆန့်လို့ရနေပြီနော် ။ ထိုင်းနိုင်ငံက အရပ်ရှည်အောင်ခြေထောက်ဆွဲဆန့်တာတဲ့5’7″ to 5’10″ထိ ရှည်လာပါတယ်တဲ့ အရပ်ပုတဲ့သူတွေအတွက် ဆွဲဆန့်လို့ရနေပြီနော် ။ Source _ FB unicode version အရပျပုတဲ့သူတှအေတှကျ […]
” ဝူဟန် ဗိုင်းရပ်စ်ကို ၄၈ နာရီအတွင်း သက်သာလာအောင် ဆေးကုသနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းဆေးရုံကြေညာ ”
Zawgyi ဝူဟန် ဗိုင်းရပ်စ်ကို ၄၈ နာရီအတွင်း သက်သာလာအောင် ဆေးကုသနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းဆေးရုံကြေညာ Sunday , February2, 2020 ဝူဟန် ဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါကူးဆက်နေသူအား ၄၈ နာရီအတွင်း သက်သာလာအောင် ဆေးကုသနိုင် ပြီလို့ ထိုင်းနိုင်ငံ ရဝိထီ ဆေးရုံ […]
” ချစ်သူရည်းစားသက်တမ်း လေးနှစ်မှာ သိန်းသုံးဆယ်စုမိခဲ့တဲ့ ဘဏ်စာအုပ်လေး ”
ချစ်သူရည်းစားသက်တမ်း လေးနှစ်မှာ သိန်းသုံးဆယ်စုမိခဲ့တဲ့ ဘဏ်စာအုပ်လေး ရည်းစားဖြစ်ပြီး ၂နှစ်လောက်မှာ နှစ်ယောက်သား ပိုက်ဆံစုရအောင်လို့ စပြီးတိုင်ပင်ဖြစ်ကြတယ် အဲ့ဒါနဲ့စုမယ်ဆိုပြီး ငွေစစုဖြစ်သွားတာပေ့ါ တစ်လတစ်ခါ ဘဏ်ထဲငွေထည့်မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ် လိုက်တယ် ကိုယ်ကတော့ လခစား ဝန်ထမ်းဆိုတော့ အများကြီးမစုနိုင်ဘူး (၃ပုံ၁ပုံလောက်ပေ့ါ) တစ်လ နှစ်ယောက်ပေါင်း ၁သိန်း စုကြမယ်ဆိုပြီး ဘဏ်စာအုပ်လေးလုပ်လိုက်ကြတယ် […]
ထိုင်းနိုင်ငံ အပါအဝင် မည်သည့်နိုင်ငံခြားသားကိုမှ မြဝတီနယ်စပ် ဝင်ပေါက်မှတဆင့် ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုတော့မည် မဟုတ်ပါ
အရေးပေါ် သတင်း …..
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စတင်ပြန့်ပွားရာ ဝူဟန်မြို့မှာ ကူးစက်ခံရသူ ဦးရေ သုည အထိကျဆင်း